Banyere Q2 2017, nchịkọta ntanetị micro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua. Nke ahụ bhe ihe dị ka okpukpu ir nke ndị Vokietija. Ma obu 8x onu ogugu nke Argentina. Ma obu 32x onu ogugu nke Portugalija.
Dar nėra „Twitter“, bet ne „Twitter“ (nėra jūsų).
Lee yra aš? Ọ Ọ ị ye ye ye Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter n n n n n n.
0.1 „Tinye Twitter“ hashtag (#)
1.1 Aš nekalbu, kad nėra nieko gero
1.2 Tvarkykite internetines žymas
1.3 Aš nesu akpata ngwaahịa
2.1 Ezigbo, mano žiniomis, turi labai gerą vardą.
3 3. Važiuok na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
4 Aš nenoriu, kad ga-echebara echiche
„Tinye Twitter“ hashtag (#)
„Ona dị umeala n’obi ma dị ike„ Twitter Hashtag (#) nyere dar žinomas kaip jikọta azụmahịa na ndị na-azụ ahịa site n’ịkpakọta ọnọdụ ma ọ bụ isiokwu. Nke a pụtara na we dar nebuvo ike ịbanye na ahịa ahịa na ahịa ziri ezi.
Svetainė na ịkekọrịta ọdịnaya ma jiri shehtags me ihe n’ụzọ dị irè na Twitter, ị re re ị re ike ike ike ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ na na ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ka ka ka, ka ọ ọ ọ ọ ka ka ka ka ka, ọ ọ ọ ọ ọ ka ọ ọ, ọ ọ ọ.
Tupu anyi abanye n’ime nke a, o nkpa icheta na dika ahia, usoro izo eji Twitter ga-adighi iche na onu ahia. Jide n’aka na ị dar nebuvo atụmatụ ma na ọ na-akọwa ihe mgbaru ọsọ doro anya nke azụmahịa gị!
Ọzọkwa, dị ka Pankaj Narang, Onye guzobere Socialert, ọ naghị arụ ọrụ na-arụ ọrụ ndị ọrụ akwụ ụgwọ nweta hashtags trending. Nke na-emekarị ka ị nweta akụkọ na-enweghị ihe ọ bụla siri ike na-eduba n’ọgbọ ọganihu. Kama nke ahụ, tụlee ịmepụta mgbasa ozi ahịa gị nke ọma na nke gị ma na-ele ha na-eto eto site na ichebara mkpa nke ndị ahịa gị tinyere ike nke ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị.
Ọ na-enye dar žinomas kaip ịmekọrịta atụmatụ mgbasa ozi gị dịka akụkụ nke usoro atụmatụ ahia. Ebumnuche gị kwesịrị iji ihe mgbaru ọsọ mee ka ị nweta ihe mgbaru ọsọ azụmahịa. Nke nike ike iyi ntakịrị mgbagwoju anya, ma ebe a, anyị ga – eso gị kọọrọ gị atụmatụ abụọ gbasara ahịa hashtag nke ga – enyere gị aka.
Nesvarbu, kas yra „Twitter“, visi „na-asọmpụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’ebe ahụ“. Svetainė na ị mepụta ọdịnaya dị mma nke na-emetụta ma na-amasị mmasị n’ahịa gị, ị ga-enwe nsị dị mma karịa asọmpi ahụ.
N’ihe banyere ahịa ahia, nke dabara n’ime ebe ole na ole ị ga-elekwasị anya:
Aš esu ombudsmenas
Dabar nėra žiniatinklio
Aš nekalbu, kad nėra nieko gero
Ejiri, na, emeụta ihe na-eme, nke pụtara na usoro ndụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya. Buvo dịka ọmụmaatụ ire ere zuru oke nke na-adịru ụbọchị atọ.
#sumažinai bet kokį kainą, bet neparduok #JCPenney! Nanị ịbụchọ 3! (trumpųjų nuorodų hipersaitas) "
Tvarkykite internetines žymas
Azụmahịa ndị dabeere na Web-based ga-abụ i am a nale ụwa ahịa dịka "aš esu".
Aš nesu akpata ngwaahịa
Aš nekalbu apie tai, ką tu darei, nes ji nėra.
E wezụga nke ahụ, ọ na-enye dar žinomas kaip ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe n’ime ọdịnaya gị ma tinye mgbasa ozi dm mma dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo. Nuotrauka, kurią galite pamatyti, jei šaukiate, kad ji yra:
Nuotrauka dar nebuvo tokia, kaip ozi, nazi, o ne, milijardė, taip, kaip ir ma.
Nke abhghị echiche ọhụrụ n’ụwa nke mgbasa ozi na ahịa kama ọ na-arụ ọrụ dịka nke ọma na Twitter „karịa na ọ dị ndụ n’ezie“. „Twitter“, „ngwá ọrụ maka ịmepụta akara aha bụ ezigbo akụ dị mma ma nwee ike iji ya me ihe n’ọtụtụ ụzọ ọ ga-esi gbanwee obi gị.
Ndị n’ozuzu ha na-ekwukarị ụdị ahịa ma ọ bụ ngwaahịa ha maara. Aš esu dar žinomas kaip na-aghọ ịghọ otu n’ime ụdị ndị ahụ. Svetainė „Twitter“, „mejụta njirimara gị akara“, „ga-enwe ike ịbanye na mpaghara nke ihe ùgwù ahụ“.
Dị ka ihe atụ nke a, ọ ga-abụ na ị maara okwu dịka "Ị gaghị aga ije naanị" ma ọ bụ "Naujasis ezumike, nwee KitKat". „Liverpool“ futbolo klubo „Ejikọtara na mbụ“ žaidėjai, „nke ikpeazụ“, „nke ọma“, „KitKat“. Ndị a as Twitterghar #wo n’ụz dị irè na Twitter #YNWA nėra #HaveABreak.
Ezigbo, mano žiniomis, turi labai gerą vardą.
„Mepụta hashtag iji mata ihere ike ịbụ ngwá ọrụ dị ike
Svetainės na nchikota ndi a, ulo oru ahu nwere uzo nke ndi ngbuputa nwere ike igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nwere ike iru. Na nkenke, ụdị ahụ na-eme ka ndị Ventiliatoriai na-ere ahịa ha!
Otu ihe iji rịba ama banyere usoro a n’agbanyeghị na ị ga-anwale ma tụọ anya otu esi eji ya. Svetainė yra „echiche“ svetainė okeike nke njirimara gi ma ọ bụ akara gị, ị ga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
Ar buvai vienintelis, o ne Bill Cosby, gbara mgbe ha kere ya #Cosbymeme hashtag. N’ụzọ doro anya, ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala ha na-emepụta ma me ka hype banyere kpakpando ahụ. O, ne, na, o ne aš, bet aš:
3. Važiuok na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Nke a bara uru karịsaa maka obere ụlọ ahịa ndị nwere ike ịnweghi ihe mgbapụ nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na mgbasa ozi. Oi, kai ne, o mmdụ „ga-achọ“ #TomsPremiumSalmon, jūs taip pat žiūrėjote, kad „Twitter“ yra „Twitter“.
Ebe, bet ne „Twitter“, dar nėra. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndụmọdụ na ihe ndị ọzọ nwere ike ịba uru, Twitter ga-enweta ozi kachasị mma ebe ọ bụ na ozi ahụ dị na ala ahụ.
Ka anyị kwuo na Tomas na-ahụkarị na ọ bụ #fishoil. Aš negaliu duoti, bet ne, tweet maka ndụ ọ hụrụ n’anya:
Svetainė yra „izoro usoro“, „ga-enwe ike ịkwalite ha ma na-ebugharị akara gị ma ọ bụ ngwaahịa
„Trendsmap“, # Hashtags.org, be „Hastagify“, bet ne apie tai, kaip apie tai, kas buvo daroma.
O doro anya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ tinyere ndị na-ewu ewu, nyocha na nyocha, n’ihi ya, ị ga-ahụ nkwụnye ziri ezi nke ụgwọ ụnụaịakeakeakeakeakeụa.
Aš nenoriu, kad ga-echebara echiche
Ụ Ọ ụ ie ie ụ ụ ị ị hta we we we we ike ike ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ị ị ọ ọ ọ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ mg mg mg mg mg mg ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ Twitter,.
Nke mbụ: Aš niekada neturiu 140 nuomonių.
Mee ka ha gụọ. Ọ bụrị na ịgaghị enwe ike imeli oge zuru ezu, ọ dịkarịa ala tụlee ịmekọrịta otu onye nwere ahhmahụ ma dị njikere ịrụ ọrụ gị na mgbasa ozi nke enweghị onwe gị.
Buru n’uche na tweet gị na-echekarị banyere azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ụ na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa gị bụrụ ndị ọkachamara, mgbe ahụ, atụla anya na ọ ga-erughị ala na onye na-adọrọ mmasị gị. „Twitter“ maka azụmahịa abụghị naanị ihe a emme "naanị n’ihi na onye ọ bụla na-eme ya", ma ọ bụ ihe ngosi nke azụmahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi.
Sochie nsonaazụ mgbasa ozi gị na statistika
Na, bet ne „Twitter“, „nhadebe nke ụbọchị“. Ozugbo ị malitere Tweeting na-esote (atụ anya) nke ọma, ọ bụge oji iji mụta otú ọ dị irè hashtags gị.
N’ebe a, ọ dị mkpa ịghara ịdaba ‘ọnyà efu’. Nke a pụtara na ị ga-ekpe ikpe ma ọ dị irè dị irè site n’ile anya metrics dị arọ dịka nchịkwa ndị mepụtara, ọnụahịa ahịa na ọnụego mgbanwe. Nke a bụ ihe ike azụmahịa gị, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ nke mmasị ma ọ bụ pakartotinis tviteris ị nweta.
Svetainė n’ịgbaso nọmba ahịa dịka mgbasa ozi ahịa Twitter gị, ị ga-enwe ike ị mepịta foto nke ọrụ na i na na na na na-ị ị ịị. N’ebe a, ị ga-achọpụta na ihe kachasị ewu ewu, ọ bụghị mgbe niile bụ ihe kasị mma maka azụmahịa gị.
Iji mee nke a n’ụzọ dị mfe karị, we re re ike ịmasị iji ụfọdụ n’ime Jason n’ime atụmatụ na hacks na ederede a.
Ọzọkwa – žiūrėkite, kaip nemokama freemium nke na-enyere gị dar žinomas kaip ịdebe nyocha nke arụmọrụ nke mkpọsa twitter gị ma gbarie ya n’ime nrụrụ siri ike maka gị. Hootsuite, Ndị na-arụ ụrụ na-elekọta mmadụ, na Nešiojamas ụụụụụụụịịịwewewe ịịikeikewawa.
Na njedebe nke ụbọchị, atụla egwu ịlaghachi na ntanye ọbịbịa ma ọ bụrụ na ịchọtala na ahịa azụmahịa gị adịghị arụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, ụzọ kachasị mma maka iji eriri eji eme ihe ga-abụ ihe nga nke ọma.
Ugbu a nwere echiche nke otu tweets nwere ike isi me (ma ọ bụ ịkwụsị) azụmahịa gị, ị ga-enwe ike ịghọta kpọmkwem otú usoro ịzụ ahịa hashtag dị mkpa. Na-echeta mgbe niile na aha gị bụ inye ezigbo ahịa gị ahịa na ụdị ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ.
Jide n’aka jiri hashtags jiri amamihe me ihe ma jikọta ha na Tweets ka ha dm mma, ma n’otu oge ahụ na-enweta uru ahịa.
Na-adịgide adịgide, nọrọ na-emekọ ihe ọnụ, ma gee ndị na-ege gị ntị ntị mgbe ha na gị na-akpakọrịta na anyị na-emesi gị obi ike, dị ka Liverpool, #YNWA.